Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 13/11/2020)
Aragtida ugu caansan ee Neuschwanstein Castle waxay ka timid buundada Mary. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqoneysaa mid ciriiri badan oo aan macquul aheyn in sawir laga soo qaado aragtida caanka ah. Sidaa darteed, waa inaad sii fuulataa buurta oo aad dhaaftaa aragtida Marienbrucke. Aragtida ugu quruxda badan ee Jarmalka waa waddo zig-zag, ka yimid madal deyr leh.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada barta "10 Fikradaha ugu quruxda badan Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)